သင့်ရဲ့ ချစ်သူ သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းက gay တစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ - Lifestyle Myanmar
သင့်ရဲ့ ချစ်သူ သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းက gay တစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
မိန်းကလေးအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ boyfriend သို့မဟုတ် husband က လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူ gay တစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ စိုးရိမ်မယ်ဆိုလည်း စိုးရိမ်စရာပါပဲ။ အချို့က အိမ်ထောင်ကျပြီး အတော်ကြာမှသာ ခင်ပွန်းက gay ဖြစ်နေကြောင်း သိရပြီး တချို့ gay တွေကတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူ
ဖြစ်ကြောင်း စောစောသိနေသူလည်း ရှိသလို နောက်ကျမှသိတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့တွေကတော့ သူတို့ gay ဖြစ်ကြောင်းကို ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက် cover သဘောမျိုးနဲ့ မိန်းကလေးချစ်သူထားလေ့ရှိပါတယ်။
Google အချက်အလက်စုဆောင်းသူ ပညာရှင် SethStephens-Davidowitz ရဲ့ရှာဖွေမှု ရလာဒ်အဖြစ် အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းက ဖောက်ပြန်မှာထက် gay တစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာကို ပိုပြီးစိုးရိမ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတင် ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေ များစွာရှိနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ဟာသူတို့ ခြောက်ခြောက်စိုစို ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်လာမယ့်ချစ်သူက gay သို့မဟုတ် bisexual လိင်စိတ်နှစ်မျိုးရှိသူ ဖြစ်နေရင်တော့ ကိုယ့်နဲ့ဆိုင်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ သံသယကိုဖြေဖျောက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို လက်လှမ်းမှီသလောက် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးက အခြားမိန်းမလှလေးတွေကို လိုက်ငေးမှာကို မိန်းကလေးတိုင်း မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ right? ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ကောင်လေးက ထူးထူးခြားခြားပဲ သူကိုယ်တိုင်အခြားမိန်းမလှလေးတွေကို လုံးဝစိတ်မပါတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ သင်အမြဲသတိထားတွေ့ရှိရင်တော့ ဒါဟာအရမ်းကို ပုံမှန်မဟုတ်ဖူးလို့ ပြောပါရစေ။ ယောက်ျားလေးအများစုဟာ လိင်ကိစ္စအကြောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာတွေးတောတတ်ကြပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဆို မသိစိတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ် မသိမသာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းနည်းလောက်တော့ ပစ်မှားတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် gay တွေအများစုကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး တောင့်တင်းတဲ့အမျိုးသားတွေဆိုရင်တော့ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့သဘာဝကြောင့် သင်ဘေးမှာရှိနေရင်တောင် နှစ်ခါလောက်တော့ပြန်ကြည့် တတ်ကြပါတယ်။ သင်ကယောက်ျားအချင်းချင်း ကြည့်တာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မသိလိုက်တာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သင့်ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရိပ်မိနိုင်ဖို့အတွက် နှစ်ယောက်အတူအပြင်ထွက်တဲ့ အခါမျိုးမှာ သတိထားကြည့်ပါ။ ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့် အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင် သင့်ကောင်လေးရဲ့မျက်လုံးက အပေါ်ကနေအောက်အထိ မျက်လုံးကစားသွားလား၊ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးဆုံမှတ်က ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာ အာရုံစိုက်ကြည့်ပါ။ ပေါင်ကြားထဲကို ခိုးကြည့်နေတတ်လား။ ဒါမှမဟုတ် အင်္ကျီကျွတ်နဲ့ အမျိုးသားဆိုရင် Six pack တွေကိုစိုက်ကြည့်နေလား ဆိုတာသတိထားပါ။
စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်သူ Joe Kort ရဲ့အကြံပေးမှုကတော့ ဒီအရာကိုစစ်ဆေးဖို့ဆို ကမ်းခြေကအကောင်းဆုံးနေရာပါပဲတဲ့။ လိင်စိတ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့သူ Bisexual ဆိုရင်တော့ ယောက်ျားလေးရော မိန်းကလေးပါစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့လို ယောက်ျားစစ်စစ်တွေကတော့ ဘယ်လောက်ပဲတောင့်ဖြောင့်နေတဲ့ အမျိုးသားဖြစ်ပါစေ သတိထားတောင်ကြည့်မှမဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေကိုပဲ လိုက်ငမ်းတတ်တာပါ။
သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထိတွေ့တတ်တယ်
တကယ်လို့ သင့်ကောင်လေးက အခြားသူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပွေ့ဖက်တာတွေ ထိတွေ့တာတွေမှာ စိတ်ထက်သန်မှုရှိရင်၊ သို့မဟုတ် သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူရေချိုးတာတွေ၊ ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ နေတာတွေ၊စတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေကိုလည်း သင်သတိထားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ယောက်ျားလုံးဝဆန်နေတဲ့အတွက် သူတို့ကိုယ်သူတို့
လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိတယ်လို့ ခံစားနေရပေမယ့် အခြားယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတော့ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲတတ်ကြပါတယ်။
သူက Homo တွေကိုမုန်းတီးသူလား ဒါမှမဟုတ် LGBT တွေနားရောက်ရင် စိတ်မသက်မသာဖြစ်တဲ့သူလား
နောက်ထပ်အကြီးဆုံး သဲလွန်စလက္ခဏာတစ်ခုကတော့ သင့်ရဲ့ချစ်သူဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ပုံစံနဲ့ homophobia ဟန်ဆောင်ပြီး သင့်ကိုပြသတတ်သူတစ်ယောက်လား။ ယောက်ျားပီသသူ အများစုဟာ gay တွေနဲ့ ပြဿနာမရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးက သူ့ကိုဘယ်တုန်းကမှ ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့တာတောင်မှ gay အမျိုးသားတွေကို တက်ကြွစွာမုန်းတတ်သူတစ်ယောက်လား။ Gay အကြောင်းကိုများပြားတဲ့ ပုံပြင်တွေပြောပြီး သင့်ကိုတရားဟောခဲ့ဖူးပြီး Gay တွေရဲ့အကြောင်းကိုမသိမသာလေ့လာနေတတ်သူတစ်ယောက်လား။ ဒီလိုမူမမှန်တွေအချက်တွေနဲ့လည်း သင့်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ပါတယ်။
အခြားသူတွေရဲ့ လိင်ပိုင်းကိစ္စကို စွဲလမ်းတတ်သူလား
သင်က သင့်ရဲ့ Homo သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောမိတဲ့အခါ သူကအရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီး မေးခွန်းတွေ မြောက်များစွာမေးတတ်သူတစ်ယောက်လား။ အခြားသူတွေရဲ့လိင်စိတ်ကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီး ဘယ်ကနေဘယ်လို gay ဖြစ်သွားကြောင်းကို သိလိုစိတ်ပြင်းပြတတ်ခြင်းဟာ သူကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ရဲ့ Sex ကိုဇဝေဇဝါနဲ့ ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်း
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူ gay ဖြစ်ကြောင်ကို မသိစေချင်တာ သို့မဟုတ် gay ဖြစ်ကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ အခက်တွေ့နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ များပြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ချစ်သူကောင်လေးက သင်နဲ့အတူ လိင်ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသူ သို့မဟုတ် များပြားတဲ့ဆင်ခြေတွေနဲ့ သင့်နဲ့လိင်ကိစ္စကို ငြင်းပယ်တတ်သူတစ်ယောက်လား။ သင်နဲ့ honeymoon ထွက်နေတဲ့ ကာလမှာပဲယခုလိုအဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံရတယ်ဆိုရင်တော့ တခုခုမှားနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
လိင်မဆက်ဆံချင်တာနဲ့ gay ဖြစ်တယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်မရပေမယ့် ဒါနဲ့တွဲပြီး အခြားလက္ခဏာရပ်တွေက သင့်ကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။
သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘွတ်ပရိုဖိုင်ကနေပြီးတော့လည်း သင်သတိထားကြည့်နိုင်ပြီး ပိုပြီးဆိုးတာက သူ့မှာအကောင့်နှစ်ခုရှိနေတတ်ပြီးတော့ တစ်ကောင့်ကပုံမှန်သုံးနေပေမယ့် သင်မသိတဲ့အကောင့်မှာတော့ ယောက်ျားစစ်စစ်တွေချည်းပဲ လိုက်အပ်ထားတတ်သလို စကားတွေလိုက်ပြောထားတာကို သင်တွေ့ရင်တော့ 90 ရာခိုင်နှုန်းလောက် သေချာနေပါပြီ။ အဆိုးဆုံးကတော့
gay group တွေ gay dating site တွေပါ သုံးနေတာ gay porn တွေကြည့်နေတာပါ မိရင်တော့ သင်ရိပ်မိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကရယ်ပြီး သင့်ကိုပြောပါလိမ့်မယ် အခြောက်တွေကတော်တော်ရယ်ရလို့ ဝင်ကြည့်တာပါ ဆိုပြီးဖာထေးတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက gay အများစုဟာ celebrities တွေဆိုရင်လည်း LGBT တွေကို ပိုပြီးစွဲလမ်းအားပေးတတ်ကြပြီး Mobile legend, နဲ့အခြားဂိမ်းတွေ ဆော့ရင်တောင်မှ မိန်းကလေးhero ကို အမြဲရွေးချယ်ပြီးဆော့ကစားတတ်ပါသေးတယ်။ ( ဒီတစ်ခုကအချက်အလက် တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြတာပါ၊ အတိအကျသတ်မှတ်စရာ မလိုပါဘူး)
ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင် ရောင်းရင်းတို့နှစ်ယောက် စေ့စပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီနော်
မိနျးကလေးအမြားစုဟာ သူတို့ရဲ့ boyfriend သို့မဟုတျ husband က လိငျတူစိတျဝငျစားသူ gay တဈယောကျ ဖွဈနမှောကို စိုးရိမျနကွေပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ စိုးရိမျမယျဆိုလညျး စိုးရိမျစရာပါပဲ။ အခြို့က အိမျထောငျကပြွီး အတျောကွာမှသာ ခငျပှနျးက gay ဖွဈနကွေောငျး သိရပွီး တခြို့ gay တှကေတော့ သူတို့ကိုယျတိုငျ လိငျတူစိတျဝငျစားသူ
ဖွဈကွောငျး စောစောသိနသေူလညျး ရှိသလို နောကျကမြှသိတဲ့သူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ တခြို့တှကေတော့ သူတို့ gay ဖွဈကွောငျးကို ဖုံးကှယျဖို့အတှကျ cover သဘောမြိုးနဲ့ မိနျးကလေးခဈြသူထားလရှေိ့ပါတယျ။
Google အခကျြအလကျစုဆောငျးသူ ပညာရှငျ SethStephens-Davidowitz ရဲ့ရှာဖှမှေု ရလာဒျအဖွဈ အမြိုးသမီးတှဟော သူတို့ရဲ့ခငျပှနျးက ဖောကျပွနျမှာထကျ gay တဈယောကျဖွဈနမှောကို ပိုပွီးစိုးရိမျကွောငျး သိရပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာတငျ ကြှနျတျောတို့မသိနိုငျတဲ့ လိငျတူခဈြသူတှေ မြားစှာရှိနပေါတယျ။ သူတို့ရဲ့ကိုယျပိုငျအခှငျ့အရေး ဖွဈတဲ့အတှကျ သူတို့ဟာသူတို့ ခွောကျခွောကျစိုစို ကြှနျတျောတို့နဲ့မဆိုငျပမေယျ့ ကိုယျနဲ့ပတျသတျလာမယျ့ခဈြသူက gay သို့မဟုတျ bisexual လိငျစိတျနှဈမြိုးရှိသူ ဖွဈနရေငျတော့ ကိုယျ့နဲ့ဆိုငျသှားပါပွီ။ ဒါကွောငျ့ကိုယျ့ရဲ့စိုးရိမျမှုနဲ့ သံသယကိုဖွဖြေောကျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးလေးတှကေို လကျလှမျးမှီသလောကျ မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။
ကိုယျ့ရဲ့ခဈြသူကောငျလေးက အခွားမိနျးမလှလေးတှကေို လိုကျငေးမှာကို မိနျးကလေးတိုငျး မနှဈသကျကွပါဘူး။ right? ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ကောငျလေးက ထူးထူးခွားခွားပဲ သူကိုယျတိုငျအခွားမိနျးမလှလေးတှကေို လုံးဝစိတျမပါတဲ့ပုံစံမြိုးနဲ့ သငျအမွဲသတိထားတှရှေိ့ရငျတော့ ဒါဟာအရမျးကို ပုံမှနျမဟုတျဖူးလို့ ပွောပါရစေ။ ယောကျြားလေးအမြားစုဟာ လိငျကိစ်စအကွောငျး ကွိမျဖနျမြားစှာတှေးတောတတျကွပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့အမြိုးသမီးတှကေိုဆို မသိစိတျကပဲဖွဈဖွဈ မသိမသာပဲဖွဈဖွဈ နညျးနညျးလောကျတော့ ပဈမှားတတျကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ gay တှအေမြားစုကတော့ ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီး တောငျ့တငျးတဲ့အမြိုးသားတှဆေိုရငျတော့ ပိုမိုစိတျဝငျစားတတျတဲ့သဘာဝကွောငျ့ သငျဘေးမှာရှိနရေငျတောငျ နှဈခါလောကျတော့ပွနျကွညျ့ တတျကွပါတယျ။ သငျကယောကျြားအခငျြးခငျြး ကွညျ့တာပဲဆိုတဲ့စိတျနဲ့ မသိလိုကျတာတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါကတော့ သငျ့ရဲ့အားနညျးခကျြဖွဈပါတယျ။ သငျရိပျမိနိုငျဖို့အတှကျ နှဈယောကျအတူအပွငျထှကျတဲ့ အခါမြိုးမှာ သတိထားကွညျ့ပါ။ ခပျဖွောငျ့ဖွောငျ့ အမြိုးသားတဈယောကျကိုတှရေ့ငျ သငျ့ကောငျလေးရဲ့မကျြလုံးက အပျေါကနအေောကျအထိ မကျြလုံးကစားသှားလား၊ သူတို့ရဲ့မကျြလုံးဆုံမှတျက ဘယျနရောမှာလဲဆိုတာ အာရုံစိုကျကွညျ့ပါ။ ပေါငျကွားထဲကို ခိုးကွညျ့နတေတျလား။ ဒါမှမဟုတျ အင်ျကြီကြှတျနဲ့ အမြိုးသားဆိုရငျ Six pack တှကေိုစိုကျကွညျ့နလေား ဆိုတာသတိထားပါ။
စိတျပညာရှငျဖွဈသူ Joe Kort ရဲ့အကွံပေးမှုကတော့ ဒီအရာကိုစဈဆေးဖို့ဆို ကမျးခွကေအကောငျးဆုံးနရောပါပဲတဲ့။ လိငျစိတျနှဈမြိုးရှိတဲ့သူ Bisexual ဆိုရငျတော့ ယောကျြားလေးရော မိနျးကလေးပါစိတျဝငျစားပါလိမျ့မယျ။ ကြှနျတျောတို့လို ယောကျြားစဈစဈတှကေတော့ ဘယျလောကျပဲတောငျ့ဖွောငျ့နတေဲ့ အမြိုးသားဖွဈပါစေ သတိထားတောငျကွညျ့မှမဟုတျပါဘူး။ မိနျးကလေးတှကေိုပဲ လိုကျငမျးတတျတာပါ။
သူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ ထိတှတေ့တျတယျ
တကယျလို့ သငျ့ကောငျလေးက အခွားသူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပှဖေ့ကျတာတှေ ထိတှတေ့ာတှမှော စိတျထကျသနျမှုရှိရငျ၊ သို့မဟုတျ သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အတူတူရခြေိုးတာတှေ၊ ဝတျလဈစလဈနဲ့ နတောတှေ၊စတဲ့ လက်ခဏာရပျတှကေိုလညျး သငျသတိထားကွညျ့နိုငျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာမှာ ယောကျြားလုံးဝဆနျနတေဲ့အတှကျ သူတို့ကိုယျသူတို့
လုံခွုံမှုအပွညျ့ရှိတယျလို့ ခံစားနရေပမေယျ့ အခွားယောကျြားလေးတှနေဲ့ ဆကျဆံတဲ့အခါမှာတော့ အနညျးငယျပွောငျးလဲတတျကွပါတယျ။
သူက Homo တှကေိုမုနျးတီးသူလား ဒါမှမဟုတျ LGBT တှနေားရောကျရငျ စိတျမသကျမသာဖွဈတဲ့သူလား
နောကျထပျအကွီးဆုံး သဲလှနျစလက်ခဏာတဈခုကတော့ သငျ့ရဲ့ခဈြသူဟာ လိငျပိုငျးဆိုငျရာမှာ လုံခွုံမှုမရှိတဲ့အတှကျ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ ပုံစံနဲ့ homophobia ဟနျဆောငျပွီး သငျ့ကိုပွသတတျသူတဈယောကျလား။ ယောကျြားပီသသူ အမြားစုဟာ gay တှနေဲ့ ပွဿနာမရှိကွပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ခဈြသူကောငျလေးက သူ့ကိုဘယျတုနျးကမှ ဘာတဈခုမှမလုပျခဲ့တာတောငျမှ gay အမြိုးသားတှကေို တကျကွှစှာမုနျးတတျသူတဈယောကျလား။ Gay အကွောငျးကိုမြားပွားတဲ့ ပုံပွငျတှပွေောပွီး သငျ့ကိုတရားဟောခဲ့ဖူးပွီး Gay တှရေဲ့အကွောငျးကိုမသိမသာလလေ့ာနတေတျသူတဈယောကျလား။ ဒီလိုမူမမှနျတှအေခကျြတှနေဲ့လညျး သငျ့ကိုဖုံးကှယျဖို့ ကွိုးစားတတျပါတယျ။
အခွားသူတှရေဲ့ လိငျပိုငျးကိစ်စကို စှဲလမျးတတျသူလား
သငျက သငျ့ရဲ့ Homo သူငယျခငျြးတဈယောကျအကွောငျး ပွောမိတဲ့အခါ သူကအရမျးကိုစိတျဝငျစားပွီး မေးခှနျးတှေ မွောကျမြားစှာမေးတတျသူတဈယောကျလား။ အခွားသူတှရေဲ့လိငျစိတျကို အရမျးစိတျဝငျစားပွီး ဘယျကနဘေယျလို gay ဖွဈသှားကွောငျးကို သိလိုစိတျပွငျးပွတတျခွငျးဟာ သူကိုယျတိုငျ ကိုယျ့ရဲ့ Sex ကိုဇဝဇေဝါနဲ့ ဖွဈနတောကွောငျ့လညျး
ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ သူ gay ဖွဈကွောငျကို မသိစခေငျြတာ သို့မဟုတျ gay ဖွဈကွောငျးကို ထုတျဖျောပွောဖို့ အခကျတှနေ့တောလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒီအရာနဲ့ ပတျသတျပွီးတော့ မြားပွားတဲ့အဓိပ်ပာယျတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ခဈြသူကောငျလေးက သငျနဲ့အတူ လိငျကိစ်စကို စိတျဝငျစားမှုမရှိသူ သို့မဟုတျ မြားပွားတဲ့ဆငျခွတှေနေဲ့ သငျ့နဲ့လိငျကိစ်စကို ငွငျးပယျတတျသူတဈယောကျလား။ သငျနဲ့ honeymoon ထှကျနတေဲ့ ကာလမှာပဲယခုလိုအဖွဈမြိုးတှေ ကွုံရတယျဆိုရငျတော့ တခုခုမှားနပွေီလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
လိငျမဆကျဆံခငျြတာနဲ့ gay ဖွဈတယျလို့ အဓိပ်ပာယျမရပမေယျ့ ဒါနဲ့တှဲပွီး အခွားလက်ခဏာရပျတှကေ သငျ့ကိုပွောပွပါလိမျ့မယျ။
သူ့ရဲ့ ဖဘှေ့တျပရိုဖိုငျကနပွေီးတော့လညျး သငျသတိထားကွညျ့နိုငျပွီး ပိုပွီးဆိုးတာက သူ့မှာအကောငျ့နှဈခုရှိနတေတျပွီးတော့ တဈကောငျ့ကပုံမှနျသုံးနပေမေယျ့ သငျမသိတဲ့အကောငျ့မှာတော့ ယောကျြားစဈစဈတှခေညျြးပဲ လိုကျအပျထားတတျသလို စကားတှလေိုကျပွောထားတာကို သငျတှရေ့ငျတော့ 90 ရာခိုငျနှုနျးလောကျ သခြောနပေါပွီ။ အဆိုးဆုံးကတော့
gay group တှေ gay dating site တှပေါ သုံးနတော gay porn တှကွေညျ့နတောပါ မိရငျတော့ သငျရိပျမိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကရယျပွီး သငျ့ကိုပွောပါလိမျ့မယျ အခွောကျတှကေတျောတျောရယျရလို့ ဝငျကွညျ့တာပါ ဆိုပွီးဖာထေးတတျပါတယျ။
နောကျတဈခုက gay အမြားစုဟာ celebrities တှဆေိုရငျလညျး LGBT တှကေို ပိုပွီးစှဲလမျးအားပေးတတျကွပွီး Mobile legend, နဲ့အခွားဂိမျးတှေ ဆော့ရငျတောငျမှ မိနျးကလေးhero ကို အမွဲရှေးခယျြပွီးဆော့ကစားတတျပါသေးတယျ။ ( ဒီတဈခုကအခကျြအလကျ တဈခုအနနေဲ့ပွောပွတာပါ၊ အတိအကသြတျမှတျစရာ မလိုပါဘူး)